Survival Bracelet & Paracord Factory - China Survival Bracelet & Paracord Abakhiqizi nabahlinzeki
Uke wakubuka “ukusinda endle”? Kulolu hlelo, inkanyezi edumile ifaka amasongo okusinda neparacord. Kungamathuluzi okusinda abaluleke kakhulu endle. Isongo lokusinda lisebenza ngomuthi, okubandakanya amathuluzi amaningi asebenzayo afana nommese, imithetho, i-carabiner hook, ikhampasi, i-barometer nokunye. ICompass isetshenziswa kakhulu endle ukuhola umkhombandlela wakho ukuvikela ukuthi ungalahleki. Ummese usiza ukucija amagatsha uma kunesidingo endle. Ama-paracords kufanele lapho ukhuphuka endle. Imvelo endle ibaluleke kakhulu, lokhu kungakusiza, mhlawumbe kusindise impilo yakho. Yize kusetshenziswa endle, lawa kungaba amathuluzi okusinda empilweni yansuku zonke ukuvikela ekulimaleni ngabaphula umthetho. Isikhunta simahhala uma ukhetha imiklamo yethu ekhona, i-350/480/550 Paracord kanye ne-plastic bople. Kungangeza i-logo ye-logo eqoshwe ku-bopha epulasitiki noma ingangezwa ngomaki w logo. Usayizi ojwayelekile ungama-205 (L) * 22 (W) mm wesongo. Noma uma amaklayenti ekhetha usayizi owenziwe ngezifiso, uyamukelwa. Ukusebenza nathi, uzoba umxhwele ezintweni zokwakhiwa, ikhwalithi, isikhathi sokulethwa, kanye nokuhamba phambili kwensizakalo yokuthengisa.
Amasongo okusinda kanye nama-paracord